Deeqa Afro oo ”sharraxaad” ka bixisay sababta ay dooratay in GEED la saaro!!! | Hadalsame Media
Home Arrimaha Caalamka Deeqa Afro oo ”sharraxaad” ka bixisay sababta ay dooratay in GEED la...
Deeqa Afro oo ”sharraxaad” ka bixisay sababta ay dooratay in GEED la saaro!!!
(Hadalsame) 29 Agoosto 2019 – “Muuqaalka aan iska duubay ee aan ku lahaa geed hala isaaro wuxuu ahaa mid aan ugu talagay oo aan sidaa ku sii daayay”, ayey tiri Deeqa Afro oo la hadashay BBC Somali.
Muuqaalkii ay iska duubtay ee ay ku codsaneysay in aan la aasin ayey ku tiri: “Waxaan codsanayaa in maalintii ilaahay i oofsado ee aan dhinto in aan wax qabri ah la ii qodin; in aan la i aasin. Arrintan waxaa ka fikirayay muddo aad u badan”.
“Adduunka dhul la’aan kama jirto. Waddan kastaa wuxuu leeyahay dhul badaan oo lama degaan ah. Dhul la dhigi karo maydka meeshii laga aasi lahaa”, ayey hadalka ku dartay.
“Anigu in la i aaso diyaar uma ahi; in kastoo rajo aad u fiican aanan ka qabin”, ayey tiri.
“Waxaan aad iyo aad ula yaabaa dadka xabaala dadka kale. Mar alle marka uu qofka dhinto waxaad arkeysaa dad sidaa u soo kala ordaya oo majaafado iyo balaayo uun sita. Waxaan ku dhihi lahaa naxariis darada iska daaya”, ayey Deeqo ku tiri muuqaalka ay soo saartay.
Deeqa Aadan Muuse waxay qirsan tahay in muuqaalka ay sameysay iyadoo og, ayna sidaa ku sii baahisay. Sababta ay u tiri yaan la i aasin iyadoo sharaxeysay ayay sheegtay in “ay arrintaa jeclayd illaa yaranteeeda”.
Lahaanshaha sawirkaDEEQA AFRO
“Anigo weligeey maba ahayn dadka qabuuraha aada. Waan maqlay qofkaas baa dhintay laakiin weligeey meel qof lagu aasayo ma dul istaagin”.
Waxay inta ku dartay: “Markan arkay meesha la is dhigayo iyo qabrigii, shucuurteyda aad bey u kacday. Markaan gurigeyga imid, heesihii iyo wixii YouTube iigu jiray ayaan iska tiray, axaadiis iyo quraan ayaan la soo degay. Waxaan dareemay meesha qof kastaa ku dambeyn karo”.
Iyadoo sharaxeysa waxa ku kallifay hadalkaa waxay tiri: “Waxa iga qasbay ee igu dhiirageliyay inaan dardaarmo waxay ahayd in maalin maalmaha ka mid ah, anigoo saran diyaarad nalagu wargeliyay in ay haleysan tahay, dib ayaana u noqonay”.
“Markii aan safarkaa ka soo noqday ee aan gurigeyga imid ayaan dardaarankaan duubay,” ayey hadalka ku dartay.
“In aysan suuragaleyn in geed la i saaro oo aan la i aasin waan ogaa in aysan dhici karin, maskaxdeydana way ku jirtay, ha noqotee, waxay ahayd ku dey iyo usha agtiisa ku tuur”, ayey ku tiri wareysiga ay siisay BBC Somali.
“Horta dhaqan muslim iyo dhaqan gaalo toona ma ahan kolley intaan ka ognahay. Anaanba yeeleen in meel la saaro”.
Balse Deeqa Afro waxay ku adkeysatay in aysan waxba u geysan diinta. “Ma aaminsani inaan diin wax u dhimay ama aan galay wax shirki ah, ilamey ahayn”, ayey tiri.
“Anigu si fiican uma aqaano diinto laakiin Quraanka waan dhammeeyay, fasiraaddana ma garanayo, si wanaagsan oo daaciyad ahna ma ahi”, ayey tiri mar ay ka hadleysay in muuqaalkeeda ay ku tiri in “diinta aysan si wanaagsan u aqoon”.
Deeqa Afro ayaa sheegtay in qoyskeeda ay arki jireen iyadoo marwalba hadalkaas dheheysa. “La yaab kuma aysan noqon ee waa wax ay ogayeen”.
“Qoyskeyga iskaba daayee, dadka aan is naqaano, asxaabteyda iigu dhow, way og yihiin”.
“Markii qof baa dhintay la igu yiraahdo waxaan dhihi jiray ‘alla walalayaalow aniga haddaan dhinto bal yaan la i aasin. Qofkii ugu horreeyay ee meel la saaro aan noqdo’ ayaan dhihi jiray. Wax iyaga ku cusub ma aysan ahayn”, ayey Deeqo tiri.
Previous article”Haddii ay jirto arrin aad naga hor fahamtey QAYLO hanugu fahamsiinin!”
Next articleSOMALIA-KENYA: Waa kuwee dalalka Somalia uga hiilliyay Kenya?!!